इन्धनको मूल्य यथावत – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर: नेपाल आयल निगमले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राखेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भए पनि सर्वसाधारणको हितलाई मध्यनजर राख्दै मूल्य यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ ।
खुम्बुमा डेनमार्ककी नागरिकको लडेरको मृ’त्यु
आखिर कत्ति हुन्छ त पाईलटको कमाई ? कसरी बन्ने पाईलट ? कसरी सामना गरिन्छ आकाशमा हुने जोखिम ? भिडियो सहित)